NSA: ၆ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ ( December2, 2013)
၆ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ ( December2, 2013)
တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ဖန်ဆင်းကာ လို့ လှလှပပလေးသုံးမရ......
ကိုယ်က ကိုယ်သာ ၊ သူက သူသာ ဖြစ်ခွင့် အပြန်အလှန်ပေးခဲ့ကြ ....... ။
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ ဖြစ်နိုင်ရင် မပြောပဲထားသလား..
နင်လျှို့ဝှက်ထားတာတွေ အားလုံး ငါ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားတယ်....
တစ်ယောက်တည်း ခေါင်းခံဖြေရှင်းနေတဲ့ နင့်ကို မသိမသာ ဂရုပိုစိုက်ရင်းပေါ့ ။
မခွဲနိုင် မခွာရက်၊ အတင်းဖက်တက်နေချင်စိတ်မရှိ
အရိပ်မြင်နေရရင်ကို ကျေနပ်နေတာမျိုး ။
ဖုန်းလှမ်းမဆက်ဘူး အချစ်ရယ် ၊
နင် အလုပ်ပျက်မှာစိုးလို့ပါ ၊
အချိန်တွေ အကုန်မြန်လှသည်မှာ ... အိမ်ထောင်ကျတာတောင် ၆ နှစ်ရှိပြီ ..။ ကလေးတစ်ယောက်နှင့် တစ်ဗိုက် ၊ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ပိုမိုသိရှိနားလည်အလိုက်သိခြင်းများစွာ ၊ ငဲ့ညှာခြင်းများစွာနှင့် အရေခွံကွာသွားသော ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တချို့တို့ကို အဖတ်တင်အောင် စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီ။ နေတတ်၍ ကျေနပ်ခြင်းဟုပဲ ဆိုဆို ၊ စိတ်မဆင်းရဲတတ်လို့ စိတ်ချမ်းသာနေခြင်း ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကမ္ဘာသေးသေးမှာ နေပျော်ဖို့သာ အဓိက မဟုတ်လား...။
အဘိုးကြီးဖြစ်တဲ့အထိ လူလဲ ကျန်းမာ ၊ စိတ်လဲချမ်းသာပြီး ကျွန်မတို့သားအမိနားမှာ ရှိနေပေးဖို့သာ.....။
၆ နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနေ့ဆို လှတပတ ကဗျာလေးဘာလေးရေးထွက်မလားမှတ်ပါတယ်။ လူတွေ စိတ်တွေ ကြမ်းတမ်းနေလိုက်တာဆိုတာ၊ ဘာဆိုဘာမှ ထွက်မလာ...ဖျစ်ညှစ်ရေးနေသလိုလို ကိုယ့်ဘာသာခံစားပြီး လို တိုရှင်း ချပစ်လိုက်မှ စိတ်ပေါ့ပါးသွားတော့သည်။ ရေးပြီးသားလေးတော့ ထားလိုက်ပါတော့လေ ဆိုပြီး ဘာမှ မပြင် မဖျက်ပဲ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်၊ လှချင်တိုင်းလှနေသော ၆ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာအမှတ်တရပို့စ်ပါပေ။
ခြောက်နှစ်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေ အမဆင်
Dec 1, 2013, 5:36:00 PM
Dec 1, 2013, 5:56:00 PM
အပေါ်က မွင်္န့ ကွန့်မန့် ၇ီရတယ်။ပျော်ရွှင်ပါစေ မမတို့ မိသားစုလေး။
Dec 1, 2013, 6:37:00 PM
Congratulation to your 6th anniversary, Sin Sin !!!
Dec 1, 2013, 10:14:00 PM
တက်တုန်းက တက်ခဲ့ပြီး အထုတ်အထည်နဲ့ လက်ပူးလက်ကြပ်မိနေတာတောင်မှ ဟိဟိ
Dec 1, 2013, 10:49:00 PM
2*18+ တွေ တယ်မန့်ကြပါလား။ LOL =D
Dec 1, 2013, 11:43:00 PM
၀ိုး ၂ယောက် ၁ ဗိုက်...
ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ... နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်... ရွှေလက်တွဲနိုင်ပါစေ..
Dec 2, 2013, 2:23:00 AM
Moe Cho Thin Happy Anniversary ပါ ညီမရေ.. မိသားစုလေး တသက်မခွဲဘဲ ရွှေလက်များ မြဲကြပါစေ။
Yesterday at 5:59am · Unlike · 5
Aye Thu Zar Happy 6th Anniversary brother and sister.
Yesterday at 7:22am · Unlike · 1
Ingjin Thant Happy Anniversary Sis and Bro!!!!
Hnin Wut Yi Happy anniversary to u and to us too. Same day . Hehe
Yesterday at 8:08am via mobile · Unlike · 1
အမေ့ သား မှုံကြီး
အားလုံး မင်္ဂလာ ၆နှစ်မှသည်
Yesterday at 8:08am · Unlike · 2
Daw Khin ThantSin Happy anniversary !
With love & best wishes....
Yesterday at 8:54am via mobile · Unlike · 2
Pe Ti Happy anniversary... Congratulations... You guys are productive hehe
Yesterday at 10:44am · Unlike · 1
Avo Ca Do Happy Anniversary!!
Yesterday at 10:50am via mobile · Unlike · 1
Naychi Maung Happy anniversary! All the best with your loved ones
Yesterday at 10:50am · Unlike · 1
Bo Bo with 1 girl now and one boy is coming. Expect to count more n more. Happyanniversary
Yesterday at 10:53am · Unlike · 1
Kaung Kin Pyar Happy anniversary !
Yesterday at 10:56am via mobile · Unlike · 1
Peach Mon သားတစ်ရာ မြေးတဖြာ ရပါစေတော်...............
Lahder Htoo ပျော်နေတာမြင်တော့ပြောစရာစကားတောင်ရှာမတွေ့ ဘူး...သူငယ်ချင်းရယ်
Yesterday at 11:00am · Unlike · 1
Aye Than happy anniversary friends.
Yesterday at 11:25am via mobile · Unlike · 1
Thandar Lwin ဆုတောင်းပေးမလို့ဟာ ဟေမာနေ၀င်းသီချင်း နားထောင်လိုက်လို့ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရတယ် ။
Yesterday at 12:04pm · Unlike · 1
Thandar Lwin ကိုစောညီထွေး နဲ့ မယ်ဆင် တို့ မိသားစု ပျော်ရွှင်ခြင်း သက်ဆုံးတိုင်ပါစေ ...
Thet Wai Happy anniversary....
Yesterday at 12:08pm · Unlike · 1
Ni Ni Mar ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် မိသားစုလေး အမြဲတည်တံ့ ခိုင်မြဲ တွယ်တာ....တိုးပွါး ...ပါစေ<3
Thuzar Lwin Happy Anniversary my friend!!!
Yesterday at 12:28pm · Unlike · 1
Kay Kay ပျော်ရွှင်ကြပါစေ
Yesterday at 12:30pm · Unlike · 1
Aunty Tint Happy Anniversary
Aunty Tint's photo.
Yesterday at 1:00pm · Unlike · 1
Khin Oo May Happy Anniversary!
Yesterday at 1:01pm · Unlike · 2
Htoo Pa Happy Anniversary!!!!!!
Yesterday at 1:36pm · Unlike · 2
စု စုအေး အာဝါနဲ့ဝိဝါတို့ ဟကြတာ 6နှစ်တောင်ရှိပြီကိုး နှစ်တရာ့နှစ်ဆယ်ကျော်အောင်ဟနိုင်ပါစေဗျား
Yesterday at 1:55pm via mobile · Unlike · 4
ThiThi Hlin ထာဝရမခွဲမခွာမိသားစုပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ
Yesterday at 3:42pm via mobile · Unlike · 1
Thin Myat Nandar HAPPY ANNIVERSARY....... May be healthy forever.....
Yesterday at 5:01pm · Unlike · 1
Aye Sanda Linn ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
Eain Dra နှစ်တစ်ရာတိုင်ပါစေ....
Dec 3, 2013, 1:27:00 AM
ခြောက်နှစ်ကနေ နှစ်ပေါင်းခြောက်ရာတိုင်ပါစေ စင်စင်ရယ်..နောက်တစ်ခါလမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်နော်...ပြီးတော့ မုန့်ပါကျွေး..အန်နီဗာစတီအထိမ်းအမှတ်ပေါ့.. :P
Dec 15, 2013, 7:19:00 PM